Iingcebiso malunga nokusebenzisa i-GPS Tracker ukubamba iqabane eliQabane elinobomi | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ukungathembeki emitshatweni okanye kubudlelwane yeyona nto ixhaphakileyo namhlanje. Ehlabathini, nabani na unokuba lixhoba, kubandakanya nosaziwayo, iimbaleki kunye nabezopolitiko. Ukuba abantu abazizityebi nabahle abavela kwihlabathi liphela abakwazi kugcina ubudlelwane babo obathandayo bukhuselekile, ke ngawaphi amathuba esinawo? Kubonakala ngathi, imitshato emide ineziphumo eziwohlokayo kumacala omabini, yiyo loo nto iba sisizathu sokuwa. Kule meko, umfazi uqalile ukuziva engaxabisekanga, ngelixa umyeni esiba nesizalo kwaye engafuni nokubuya ekhaya. Iindidi ezinjalo zemicimbi ziqala ukudala iingxaki ezinzima nokunyanzela umfazi ukuba afumane intuthuzelo komnye umntu. Yimeko ngqo apho ubomi obuhle bomtshato buqala ukuya ezantsi. Inyaniso edidayo phakathi kobudlelwane obude obuninzi ukuba kukho izinto ezidimazayo kunye nezilingo ezikhokelela iqabane lakho kwiqabane ukuba liwonakalise ngokupheleleyo ubomi bakho.
Ukuba ufumene umfazi wakho esenza ukungathembeki kwaye ufuna indlela yokuqinisekisa ukuba ukukrokrela kwakho kunokwenzeka ukuba zichanekile, ke ukwindawo elungileyo apho uyakufumana izandla zakho ngolwazi oluhambelana neGPS Tracker, eya kukunceda ukulandela umkhondo wobumhlophe bakho kwaye ubuyele kuwe ukuze wazise ukuba uphi kwaye wenza ntoni ngoku. Akukho maxhala! Kule mihla, izixhobo ezitsha ezahlukeneyo zazisa imihla ngemihla, ezenza ubomi bube ngcono xa kuthelekiswa nobomi bangaphambili xa abantu babengenazixhobo zaneleyo zokuzisebenzisa. Ke ukuba unayo nayiphi na inkxalabo musa ukothuka kwaye wenze ugxininiso lwakho ekufumaneni izisombululo ngaphambi kokuba iqabane lakho lonakalise ngokupheleleyo ubomi bakho.
Ngaba kufanelekile ukuQesha ubuKhangeli babucala?
Ewe unokhetho lokuqesha umphenyi wabucala ozokusebenzela ekufumaneni indawo kwaye aqokelele ulwazi malunga nenkosikazi yakho efuna ukukopela okanye kukukhohlisa. Nangona umcuphi wabucala eyindlela engcono, ungathatha yonke imisebenzi usebenzisa itekhnoloji yale mihla kwaye ungafumana ulwazi olufanayo ngaphandle kokuchitha ii-bucks ezaneleyo ekuqeshweni komcuphi okanye kwi-PI Ngoku, kunokwenzeka ukulandelela indawo yomntu usebenzisa omncinci isixhobo sibulela kubuchwephesha bale mihla esenza ukusebenzisa iisethayithi zomkhosi ukufumana indawo yomntu. Ngaphambi kokuba uqhubekele phambili, kufuneka wazi ukuba zimbini iintlobo zeyunithi ye-GPS, ezinje ngala:
IGPS yexesha lokwenyani
Yintoni i-GPS Logger, kwaye ndingayisebenzisa njani?
Ukuthathela ingqalelo luhlobo lwerekhoda yevidiyo erekhoda isantya ixhoba elihambe ngalo, iindawo kunye nexesha ezichithwe ngokufanelekileyo ngaphezulu kwendawo kunye nokunye. Ukuba unomdla wokwazi apho iqabane lakho lichitha khona esi sixhobo kunokuba luncedo kuwe ngaphandle kwamathandabuzo. Ngokukrakra, sisiqwenga somsebenzi esikuvumela ukuba uqiniseke ukuba inkosikazi yakho iyinyani okanye ayazi ukuba iphi. Khawufane ucinge, ukuba umfazi wakho uchitha uthile endlwini yomntu othile okanye udibana naye kwimotele, ke usebenzisa esi sixhobo uya kuqinisekisa ngokuchanekileyo ukuba ubuphi kwaye ixesha elingakanani. Ngobukhulu, isixhobo sincinci kwaye sinokubekwa naphi na apho ufuna khona. Ukuze usebenzise le nto, kuya kufuneka ubeke esi sixhobo kwiithagethi zakho okanye kwinqwelo. Nanini na xa ulungiselela ukubukela ulwazi oluqokelelwe sisixhobo, sisuse okanye sikhuphe emotweni kwaye siyikhuphele kwi-PC yakho ukuze sikhuphele ulwazi olukwisixhobo esiziqokelele wena. Sebenzisa umfanekiso wesatellite, icebo liya kubonisa kuzo zonke iindlela ojolise kuzo kwifomathi yokubhaliweyo.
Yintoni i-GPS yexesha lokwenyani, kwaye yeyiphi inkqubo yokuyisebenzisa?
Luhlobo oluphambili lwe-Logger GPS kwaye inokuvumela ukuba ubone ulwazi oluqokelelweyo ngexesha lexesha lokwenyani kwiwebhusayithi, isikrini, okanye iifowuni eziphathwayo. Ungasisebenzisa esi sixhobo kwaye ufumane iindawo ngqo zeqabane lakho ukubonisa ukungathembeki kwakhe. Nangona i-Logger GPS ingenamali yokuhlawula inyanga nenyanga, uyakuhlawula ubhaliso lwale nkonzo kuba inikezela yonke idatha ngexesha langempela usebenzisa inethiwekhi yeselula eyiyo. Asithethi ngazo zonke izixhobo, kwaye izixhobo ezinje zimbalwa ngamanani akucelayo ukuba uhlawule umrhumo wenyanga.
Ukubuyiswa kwelizwi kunye neNkqubo zee-GPS zokuKhangela
Ukucoca iinkxalabo zakho, sineegajethi ezininzi ezikuvumela ukuba ufumane imfihlo emva kwendawo. Ewe, ukuba umfazi wakho ukukopela ngaphakathi, akukho xesha unokufumana lula usebenzisa izixhobo ezininzi. Ezinye izixhobo zezi zilandelayo:
Ukulandelelwa kwemoto yeGPS
Ukurekhodwa kweLizwi lePendant yeMini
Isicatshulwa sePowerBand yedijithali
Kungcono uyazi ukuba loluphi uhlobo lwesixhobo osifunayo sokuhlola umfazi wakho, indawo ahamba kuyo, kunye nomntu adibana naye. Nje ukuba ufumanise, ubomi bakho buya kusindiswa ukuba bungonakaliswa. Ukuba unomdla wokuthenga uhlobo olunjalo lwegajethi, kuya kufuneka undwendwele I-OMG-Solutions.com ngaxeshanye ngokulandela ikhonkco ukuze izandla zakho zombini zibe nezixhobo ezixabisekileyo.
Izinto eziluncedo kunye nezinto eziluncedo kwiNkqubo ye-GPS yokuLanda umkhondo
Unokwazi malunga nezibonelelo zeNkqubo ye-GPS yokuLanda umkhondo, kwaye okokuqala iya kuxela indawo ekujolise kuyo kungakhathaliseki ukuba bakweliphi ikona yesitalato. Kubonakala ngathi, ayizokwazisa into ebisenziwa liqabane lakho okanye umntu othile, kwaye ukuba inkosikazi yakho inokwabelana ngesondo nomnye umntu eofisini ngoko ke naliphi na ibali lokufika kade ngenxa yomsebenzi omninzi liya kuhlala linjalo. Kukho isiqwenga seendaba ezilungileyo kumadoda anje ukuba enye inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS iza nemakrofoni kwaye emva kokufumana isixhobo kufuneka wenze umsebenzi onzima wokufumana isikhwama somfazi wakho kwakamsinya ngaphambi kokuba umazise.
Ngenxa yeminye imibandela enobuzaza, ukuba i-GPS Trackers ayikwazi ukusebenza, ke kufuneka uthathe ikhefu, cinga ukuba sithini isityalo sakho esilandelayo. Yeka! Kukho isisombululo sokuba usebenzise izixhobo zeselfowuni, orekhoda iirekhodi okanye iikhamera zokuhlola ukuhlola ukuba umfazi wakho ukukopela kuwe okanye hayi. Ngohlobo lwezixhobo ezinjalo, unokufikelela ngokulula kuzo zonke ii-imeyile, izikhombisi zefowuni, imethadatha kwiminxeba, imiyalezo ekhawulezileyo ngaphezulu kweSkype kunye nokunye.
5498 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-7 Namhlanje